ယူနိုက်တက်လည်း ဖလားတွေ ယူတုန်းက ငွေသုံးခဲ့တာပဲ လို့ နှိုင်းယှဉ် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ဂွာဒီယိုလာ – Sport Gaber
ယူနိုက်တက်လည်း ဖလားတွေ ယူတုန်းက ငွေသုံးခဲ့တာပဲ လို့ နှိုင်းယှဉ် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ဂွာဒီယိုလာ
August 15, 2021 August 15, 2021 - by Sports Gaber - LeaveaComment
ဒီတလောမှာ ပြောင်းရွှေ့ကြေး များစွာ သုံးပြီး ကစားသမားသစ် ဝယ်ယူထားတဲ့ အပေါ် မန်စီးတီးက ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရပြီး မန်စီးတီး နည်းပြ ပက် ဂွာဒီယိုလာကတော့ ငွေသုံး ဖလားတွေ ယူရတာက အခုမှတင် မဟုတ်ဘဲ ဟိုးယခင်တုန်းက ယူနိုက်တက်လည်း လုပ်ခဲ့တယ်လို့ မြို့ခံ ပြိုင်ဘက် အသင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
စီးတီးနည်းပြ ပက် ဂွာဒီယိုလာကတော့ စီးတီးပိုင်ရှင်တွေဟာ ငွေကြေး အကျိုးအမြတ်ထက် အသင်းထံ ပိုပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကာကွယ် ပြောဆိုလာခဲ့တာပါ။
” တချို့ အသင်း ပိုင်ရှင်တွေက အကျိုးအမြတ် လိုချင်တယ်။ ကျနော်တို့ အသင်းပိုင်ရှင်တွေက အဲဒီလို အကျိုးအမြတ် မလိုချင်ဘူး။ ဒီတော့ သူတို့ပိုင်ရှင်တွေက အသင်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မလုပ်ကြဘူး၊ ကျနော်တို့ကတော့ ကျနော်တို့ လုပ်နိုင်တာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ် ငွေသုံးစွဲတယ်။
အရင်ကတော့ ပြောစရာ ကလပ်အသင်းက တစ်သင်း နှစ်သင်းလောက် ရှိကြတာပါ။ အခု ချယ်ဆီးကလည်း ရိုမန် အေဗရာမိုဗစ်ချ် ရှိတယ်။ ကျနေ်ာတို့ ကလပ်ကလည်း ရှိတ်မန်ဆော် ရှိတယ်။ သူတို့က ဘောလုံးမှာ လိုချင်တာတွေ ကို ဝယ်ကြတယ်။ ဒီတော့ ဘာပြသနာ ရှိလို့လဲ? ကျနော်တို့မှာလည်း FFP စည်းမျဉ်းနဲ့ အကန့်အသတ် ရှိပါတယ်။ သူတို့ မန်စီးတီး ငွေသုံးတာ သဘောမကျရင် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြီး တရားရုံး တက်နိုင်ပါတယ်။
ဟိုးအရင် နှစ်တွေ၊ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဖလားတွေ အများကြီး ရတုန်းကလည်း သူတို့ တခြားကလပ်တွေထက် ငွေ ပိုသုံးခဲ့လို့လေ၊ အဲဒါကိုရော မှတ်မိကြလား။ အဲဒီတုန်းက မန်စီးတီးက မလုပ်နိုင်ဘူး ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အခု ပိုင်ရှင်တွေ အဲဒီတုန်းက မရှိဘူးလေ။ ” လို့ ပက် ဂွာဒီယိုလာက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
လီဗာပူးနည်းပြ ကလော့ပ်က ဈေးကွက်ထဲ မန်စီးတီး၊ ချယ်ဆီးတို့ အကန့်အသတ်မရှိ ငွေသုံးနိုင်ပေမယ့် သူတို့ ကလပ် ကတော့ ရှာဖွေထားတဲ့ ငွေကြေးကိုသာ ပြန်သုံးရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဒီတေလာမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး မ်ားစြာ သံုးျပီး ကစားသမားသစ္ ၀ယ္ယူထားတဲ့ အေပၚ မန္စီးတီးက ေ၀ဖန္မႈေတြ ခံေနရျပီး မန္စီးတီး နည္းျပ ပက္ ဂြာဒီယိုလာကေတာ့ ေငြသံုး ဖလားေတြ ယူရတာက အခုမွတင္ မဟုတ္ဘဲ ဟိုးယခင္တုန္းက ယူနိုက္တက္လည္း လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ျမိဳ႔ခံ ျပိဳင္ဘက္ အသင္းနဲ႕ နိႈင္းယွဥ္ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
စီးတီးနည္းျပ ပက္ ဂြာဒီယိုလာကေတာ့ စီးတီးပိုင္ရွင္ေတြဟာ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္ထက္ အသင္းထံ ပိုျပီး ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေနၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကာကြယ္ ေျပာဆိုလာခဲ့တာပါ။
” တခ်ိဳ႕ အသင္း ပိုင္ရွင္ေတြက အက်ိဳးအျမတ္ လိုခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ အသင္းပိုင္ရွင္ေတြက အဲဒီလို အက်ိဳးအျမတ္ မလိုခ်င္ဘူး။ ဒီေတာ့ သူတို႔ပိုင္ရွင္ေတြက အသင္းအတြက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ မလုပ္ၾကဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လုပ္နုိင္တာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံတယ္ ေငြသုံးစြဲတယ္။
အရင္ကေတာ့ ေျပာစရာ ကလပ္အသင္းက တစ္သင္း နွစ္သင္းေလာက္ ရွိၾကတာပါ။ အခု ခ်ယ္ဆီးကလည္း ရိုမန္ ေအဗရာမိုဗစ္ခ်္ ရွိတယ္။ က်ေန္ာတို႔ ကလပ္ကလည္း ရွိတ္မန္ေဆာ္ ရွိတယ္။ သူတို႔က ေဘာလံုးမွာ လိုခ်င္တာေတြ ကို ၀ယ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ဘာျပသနာ ရွိလို႔လဲ? က်ေနာ္တို႔မွာလည္း FFP စည္းမ်ဥ္းနဲ႕ အကန္႔အသတ္ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ မန္စီးတီး ေငြသံုးတာ သေဘာမက်ရင္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပီး တရားရံုး တက္နုိင္ပါတယ္။
ဟိုးအရင္ နွစ္ေတြ၊ မန္ခ်က္စတာ ယူနိုက္တက္ ဖလားေတြ အမ်ားၾကီး ရတုန္းကလည္း သူတို႔ တျခားကလပ္ေတြထက္ ေငြ ပိုသံုးခဲ့လို႔ေလ၊ အဲဒါကိုေရာ မွတ္မိၾကလား။ အဲဒီတုန္းက မန္စီးတီးက မလုပ္နုိင္ဘူး ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ အခု ပိုင္ရွင္ေတြ အဲဒီတုန္းက မရွိဘူးေလ။ ” လို႔ ပက္ ဂြာဒီယိုလာက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
လီဗာပူးနည္းျပ ကေလာ့ပ္က ေစ်းကြက္ထဲ မန္စီးတီး၊ ခ်ယ္ဆီးတို႔ အကန္႔အသတ္မရွိ ေငြသံုးနိုင္ေပမယ့္ သူတို႔ ကလပ္ ကေတာ့ ရွာေဖြထားတဲ့ ေငြေၾကးကိုသာ ျပန္သံုးရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ေျပာဆိုထားပါတယ္။
Credit – HT
Previous Article အဖွားရဲ့ရက်လည်မှာ အဝေးကနေပဲလှမ်းကန်တော့ရတဲ့အဖြစ်ကို ၀မ်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး
Next Article အဖွင့်ပွဲစဥ်မှာပဲ အရှုံးဆိုတဲ့ အရသာကို မြည်းစမ်းလိုက်ရတဲ့ ချန်ပီယံ မန်စီးတီး